onlineakhabar.com: होसियार !! सुन्दर देखिने चक्करमा यी महिलाको अनुहार बेलुम जस्तै फुल्यो (भिडियो सहित)
Amazing Girl, Amazing Woman, Amazing World, Health News, health Tips, International, Main News, Tips, Trick and Tips » होसियार !! सुन्दर देखिने चक्करमा यी महिलाको अनुहार बेलुम जस्तै फुल्यो (भिडियो सहित)
होसियार !! सुन्दर देखिने चक्करमा यी महिलाको अनुहार बेलुम जस्तै फुल्यो (भिडियो सहित)
आजभोली मानिसहरु राम्रो देखिनका लागि बिभिन्न किसिमका सर्जरी देखि लिएर अप्रेशन सम्म गर्न पछि हट्दैनन । जसका कारण उनिहरु सुन्दर देखिउन् । बिशेष गरि महिलाहरु आफ्नो आँखा वरपर हुने डार्क सर्कल्‍स हटाउनको लागि आफ्नो स्किनमा कार्बनडाइअक्साइड को इन्जेक्सन लगाउने गर्दछन् । इन्स्‍टाग्राममा अपलोड गरिएको एउटा भिडियोमा एउटा महिलाको आफ्नो स्किन भित्र ग्यास इन्जेक्ट गरिएको छ । जसले उनको आँखाको तल्लो भाग सुन्नीएको छ ।
कसरी हुन्छ यो ट्रीटमेन्ट
भिडियोमा महिलाको बाँया तर्फको आँखाको साइडमा सुइ लगाइन्छ र दुबै आँखा मुनि ग्यास राख्नाले सुन्निने हुन्छ । ग्यास इन्जेक्ट गरेपछि यसलाई शरीरले प्राकृतिक रुपले सोस्ने गर्दछ र यसलाई हटाउनु पर्दैन । यो ट्रीटमेन्ट जहाँ ग्यास इन्जेक्ट गरिएको छ त्यहाँ अक्सीजन बढाउँछ र स्किनलाई सुधारर्ने काम गरी डार्क सर्कल हटाउँछ ।
६ महिले सम्म रहन्छ यसको असर
यो ट्रीटमेन्टले स्किनमा कोलेजन बढाउँछ जसले गर्दा अनुहारलाई केहि मात्रामा जवान देखाउने गर्दछ । यो ट्रीटमेन्ट ६ महिना सम्मको हुन्छ । रिङकल्‍समा टाढा रहनको लागी यो यो ‘नन-सर्जिकल’ उपाय हो । तर स्‍पा र क्लिनिक वेबसाइट्सका अनुसार, यो ट्रीटमेन्ट दुखाईपूर्ण नभएको बताउँछ ।
Tags : Amazing Girl Amazing Woman Amazing World Health News health Tips International Main News Tips Trick and Tips